(नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका महान नेता माओत्सेतुङको प्रभाव प्रचुर भेटिन्छ। वि.सं. २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरिँदा चीनमा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा भर्खर नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको स्थिति थियो त्यसैले नेपाली क्रान्तिको ढाँचा, सिद्धान्त, नारा, नीति तथा कार्यक्रमहरुमा माओ बिचारको स्पष्ट छाप देखिन्छ। माओत्सेतुङको व्यक्तित्व, व्यवहार र दैनिकी समेत नेपाली नेताहरुको लागि एक मोडेल बन्यो। यो प्रभाव पछिल्लो समयमा ‘माओवाद’ र ‘माओवादी जनयुद्ध’को रुपमा उत्कर्षमा पुग्यो। यसै परिप्रेक्षमा माओवादी पार्टीभित्र नेता तथा कार्यकर्ताहरुले हिजोको समयमा काम गर्ने तरिकामा माओको शैलीलाई कतिको अनुसरण गरे भन्ने कुराको समीक्षा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। यसको लागि चीनमा क्रान्तिपछि पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरुका लागि काम गर्ने तरिकासम्बन्धी माओत्सेतुङले जारी गरेका सोह्रवटा निर्देशक बुँदाहरु सम्झनु उपयुक्त होला । कमरेड माओत्सेतुङको १२८ औं जयन्तीको अवसरमा हामीले उहाँको उच्च सम्मान सहित यो सामग्री यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं )
एउटा आम कथन के छ भने हामीले भावी कामको लागि सम्भावना देख्नुपर्छ । काममा केही लचिलोपनको सम्भावना देख्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । क्वमिन्ताङ्ग सेनाविरुद्ध कार्वाही गर्दा हामीले तिनीहरूलाई दमन गर्न उनीहरूभन्दा कैयौं गुना बढी सैनिकलाई एकत्रित गर्दथ्यौं । बिना तयारी हामी कुनै लडाईं लड्दैन थियौं । समाजवादी निर्माण र नियोजनको लागि पनि काममा हामीले सम्भावना देख्नुपर्दछ। हाम्रो काम हाम्रो योजनाभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनुपर्दछ। हामीले यो सम्भवना देख्नुपर्छ कि जनसाधारणले योजनाभन्दा पनि अगाडि बढेर काम गरून् । यदि लक्ष्य निकै नै ठूलो छ भने त्यहाँसम्म पुग्न कठिन हुनेछ, त्यसलाई पार गर्नु त टाढैको कुरा हो। उत्पादन टिमको प्रमुखको अक्सर भनाइ के छ भने “१०,००० को लक्ष्य हाम्रो लागि ठूलो कुरा हैन, तर असफलताको एक सम्भावनालाई प्रतिवाद गर्न १०, ००० सित हामी डराउँछौ ?” अतीतमा यो भनाइले काम गर्ने मजदुरहरूलाई काममा उत्साहित गर्न खराब असर गर्दथ्यो । यदि हामीले जानीबुझीकन जनसाधारणलाई उत्पादन लक्ष्य पार गर्न दिने हो भने तिनीहरू उत्साहित हुनेछन् र पहिलेभन्दा पनि बढी कठोर परिश्रम गर्नेछन् । यसको साथै हामीले उत्पादनप्रति पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ किनकि कुनै पनि चीजप्रति ध्यान केन्द्रित भएन भने यसको अर्थ हुन्छ – त्यसप्रति कुनै पनि नीति नै छैन । यसरी नै साहित्य र कला कर्मको क्षेत्रमा पनि त्यही कुरा सत्य हो । कुनै पनि नाटक प्रदर्शनमा दर्शकहरूद्वारा सोचविचार, चर्चा गर्ने ठाउँ राखिदिनुपर्दछ । यदि नाटकको पहिलो अङ्क देखेपछि तपाईलाई दोस्रो अङ्कमा के हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा हुने हो भने प्रदर्शन असफल हुनेछ । यसै किसिमले वक्तालाई केही कुरा नभनिकनै छाडिदिनुपर्दछ ।
आफ्नो मस्तिष्कलाई जीवावशेष (fossil) बन्न नदेऊ। राजनीतिक स्थितिको अड्कल गर्न, मानिसहरूको सोच्ने प्रवृत्तिलाई अनुसन्धान गर्न र आर्थिक स्थिति पत्ता लगाउन सक्षम बन । पे-ताई-हो सम्मेलनमा उच्च लक्ष्य राखिएको थियो। होपे र शानतुङ्गको यात्राको दौरानमा मैले त्यो व्यवहारिक देखिन। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको छैठौँ सम्मेलनमा स्टील उत्पादनको लक्ष्य घटाएर दुई करोड टन गरिदियौं। सङ्घाई सम्मेलनमा यसलाई अझ न्यून गरिदियौं। यस किसिमले हामीले कदम-कदम उत्पादनलाई पूरा गर्न योग्य बन्यौँ ।
स्थितिको निरीक्षण गर्नाले नै तपाईं महत्त्वपूर्ण मौकामा निर्णय गर्न सक्नु हुनेछ । केही कमरेडले स्थितिलाई सम्पूर्ण रुपले बुझ्न सक्दैनन् । अन्य केही काम गर्ने बेलामा निर्णय त लिन सक्दछन्, तर सही किसिमले निर्णय लिन सक्दैनन्। हुलमुलपन र निर्णयविहिनता खराब कुरा हुन्। निर्णय दृढ़तापूर्वक लिन आवश्यक छ। कुनै पनि अवसर नगुमाऊ किनकि एकपटक समय गएपछि फेरि फर्केर आउँदैन। कम्युनको समस्याबाट यो निकै स्पष्ट हुन्छ।
कम्युनको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गत वर्ष स्पष्ट भएको थिएन। केही समयको अन्तरालमा २७ जनवरीलाई समस्याको विस्तृत रूपमा विचार गरियो पछि मैले चओ जु-याङ्गको रिपोर्ट पढेँ, फेरि तिएनसिनमा ल्यू जे-हओ गएँ। शान्तुङ्गमा तान चि-लुङ्ग र लू हुङ्ग पिङ्ग कम्युनमा गएँ। मैले निम्नलिखित समस्याहरू देखेँ, कागजको एक टुक्रा, एक पाना, अलग विचार राख्नेको लागि एक टोपी, चाबीको एक गुच्छा, एक उदघोषण र एक सिँढी । तब मैले टीमद्वारा स्वामित्व राखिएको व्यवस्थाको खोज गरेँ। पछिल्लो सम्मेलनले यस समस्याको समाधान गरिदियो । केही कमरेड आफूभन्दा माथिका साथीहरू र मातहतका साथीहरूसित निकै डराउँछन्। अबदेखि माथिल्लो र मातहतका बीचको स्तर समन्वयात्मक रूपले हल गर्न आवश्यक छ।
विचारहरूलाई व्यक्त हुने मौका नदिने हो भने बैठकहरू कामकाजी हुँदैनन् । कुनै पनि विचार-विमर्शभन्दा पहिला त्यसको तयारीको लागि समय चाहिन्छ। केही बैठकहरूमा कुनै विषय हुँदैन । मैले न्यूनतम पनि सय पटक यो कुरा औँल्याए हुँला कि विचार अभिव्यक्त नहुनु गलत हो। कुनै पनि समस्यालाई ढाकछोप नगर। सही अर्थमा समस्या के हो भन्ने कुरा जनतालाई बुझ्नबाट नरोक। समस्या हल गर्नुभन्दा पहिला त्यो समस्याको बारेमा सम्पूर्ण रुपले बुझ्नुपर्दछ र त्यसमाथि चर्चा हुनुपर्दछ।
राक्षससित नडराऊ, लाज नमान, कायर नबन । साहसी र दृढ होऊ । हाम्रा केही कामरेडहरूको चरित्र कमजोर छ। उनीहरू गलत चिन्तनबाट मुक्त भएका छैनन्। उनीहरू दोष हटाउन डराउँछन्। कार्यकर्ताहरूमा सत्यतामा कायम रहने साहस हुनुपर्दछ र उनीहरूले सामन्ती कालको व्यवहारको अनुसरण गर्न हुँदैन। तपाईं के कुरासित डराउनु हुन्छ ? अरु केही होइन यी ६ चीजसित डराउनु हुन्छ – पदबाट बर्खास्त, पदावनती (माथिल्लो पदबाट तल्लो पदमा झर्नु), पार्टीबाट निस्कासन, पत्नीसित छोडपत्र, हत्या र जेल जाने ।
औद्योगिक विभागहरूसित सुदृढ सम्बन्ध कायम गरिनुपर्दछ । तीन राजकीय आयोगहरू (राजकीय योजना आयोग, राजकीय आर्थिक आयोग र राजकीय पूंजीगत निर्माण आयोग) र दुई मन्त्रालयहरू (धातु उद्योग मन्त्रालय र मेसिन निर्माणसम्बन्धी प्रथम मन्त्रालय) सित घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्छ।
माओवादी केन्द्रको प्रदेश सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डको सम्वोधन (पूर्णपाठ)